The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2015 - News Ọchịchị
The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2015
Isiokwu a na-akpọ “The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2015” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Thursday 24th December 2015 08.00 UTC
iOS gamers n'ezie imebi nwa maka oke na 2015, na ihe abụọ ma ọ bụ atọ ndị magburu onwe ọhụrụ egwuregwu ẹkesiode kwa izu. Independent Mmepe na-fizzing na echiche, ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-emekarị mgba iji mee ka ha uba n'ebe ha.
Warara ala a nnukwu longlist iru 25 egwuregwu na-apụta ebe a aka-akpata ụfọdụ nnukwu utu aha, si Skylanders Superchargers na Real Boxing 2 ọgụ The Light, Letterpad Ị ga-Mee a Boat.
Ebe a bụ nke ikpeazụ 25: na Guardian si ghota nke 2015 na iOS Ịgba Cha Cha. Na, ee, e nwere a iche iche Android egwuregwu roundup na i nwere ike ịhụ ebe a.
25. PewDiePie: Mgbe Ochie nke Brofist
A egwuregwu dabeere na otu onye nke ụwa kasị ewu ewu na YouTubers ike iyi gị ka a uzommeputa n'ihi na a ego-na, ma nke a bụ ihe ọ bụla ma. Mgbe Ochie nke Brofist bụ a mma-deere platformer na nza nke maara ebe e kwuru banyere Ịgba Cha Cha akụkọ ihe mere eme. Ọ na-eme ka ị na-adabere na nkà gị kama gị obere akpa (n'ihi na-eji ngwa ịzụrụ) aka inwe ọganihu.
24. Star Wars: Galaxy nke Heroes
Na iri 2015 o yiri ka eme ka a ọhụrụ Star Wars mobile egwuregwu, ha niile mma. Nke a bụ onye na Fans ga agụ anyị agụụ ọtụtụ: a ọma-e edinam egwuregwu onye mesiri ike na-achịkọta odide si dị iche iche eras nke Star Wars, na mgbe ahụ na-akpụ ha n'ime ìgwè ibu agha ya dị n'eluigwe na ụwa.
23. ọchịchịrị ikwughachi
Anyị na hụrụ audio-na egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka Papa Sangre on iOS tupu, ma nke a bụ dị iche iche, -eji "visualized dị mma" na-egosi ya gburugburu dabeere na ụda ị na-eme. Ma e wezụga ndị ụda na-adọta … ọma, anyị agaghị emebi ya. Ma nke a abụghị a egwuregwu ị ga chọrọ igwu naanị abalị - na ọ ga i jumping nke gị sofa.
"Anyị maara. Ọ na-adịghị ele anya dị ka ukwuu. Ma anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ a dị ezigbo mma mgbaghoju anya egwuregwu,"Kwuru Mmepụta Simogo - nke Year Walk na Ngwaọrụ 6 ama - na ha bụ ndị ziri ezi. SPL-T yiri nnọọ mfe: ị na-enweta na ihuenyo ka kee ya n'ime halves (na mgbe ahụ na halves ọzọ, etc). Ma ka ị na-amalite na-emepe emepe gị atụmatụ, ọ na eme nzuzu gị na.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ezigbo oge ịse-'em-ye mgbọ streaking n'ebe nile, ị ga-n'anya AirAttack 2. Ya agha ụwa nke abụọ isiokwu ahụ gị na-efe efe site 22 na ọkwa-agbapụ na bọmbụ agha bụ ndị iro, na mgbe ikpọ ndịna-emeputa na-egwu egwuregwu ahụ isi n'ire ebe, ya gameplay na-emesi obi esiri Fans nke genre.
AirAttack 2 Foto: PR
20. ududo: Rite nke mabeghị Ọnwa
Sequel ka 2009 si (ka bara uru apụ) ududo: Ihe Na-akpata Bryce Manor, nke a bụ ihe asatọ legged mgbaghoju anya imata ụzọ esi eme, dị ka ị inyocha ihe hapụrụ mansion trapping na ụmụ ahụhụ na-ekpughe ihe dị ebube, akụkọ. Part nke a na-emekarị (tinyere egwu egwu dị ka akwacha na N'okpuru laithaus) obere frenetic ụbụrụ-ndinyanade mbịne.
19. N'okpuru laithaus
Ọ bụ nnọọ dị iche iche egwuregwu, ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya Ncheta Valley na 2014, mgbe ahụ N'okpuru The laithaus pụrụ ịbụ gị ọzọ fix. Ọ bụ a mgbaghoju anya egwuregwu ka n'okpuru a ísìsì, ebe ị nwere na-atụgharị n'ibu wiil ahụ gị na-eto eto dike ụzọ ya furu efu nna nna. Ọ bụ na-egbuke egbuke ma na yi, na-anwale gị mpụta echiche nkà.
Downwell anya dị ka a ụdịdị dị iche iche egwuregwu, ma na-arụ nnọọ ka otu oke - zuru ezu na ihuenyo mkpọchi ịchịkwa ya edinam. Ma egwuregwu meriwo ọtụtụ ndị n'elu ya emere ọtụmọkpọ, dị ka unu na-emikpu ala a nke ọma na-achọ akụ. The omimi (pun nwere obere bu n'obi) -abịa site na ngwá agha na ike-acha ọkụ na ị na-anakọta n'ụzọ.
17. Stick nte 2
Dị ka ọtụtụ a n'afọ iri na ụma-edinam egwuregwu dị ka a egwuregwu SIM, Stick nte 2 ka ị hoicking fours na isii isii megide a nso nke na-emegide, na n'ụzọ zuru okè yipụ-ala njikwa na silky-eji ire ụtọ na-aga aga. The kasị mma nte game on iOS, ma ya arụzi kwesịrị ime ka o ịrịọ ọzọ ukporo Fans nakwa dị ka cricketing buffs.
16. fallout Chebe
Site na njedebe nke 2015, Fallout Fans gba egwú fallout 4 on ha consoles. Ma ya ruo mgbe ntọhapụ, mobile egwuregwu fallout Chebe bụ ha rijuru afọ,-in fix - ma a n'elu-notch game n'onwe ya. The egwuregwu ahụ gị na-agba ọsọ a post-apocalyptic ndo n'okpuru ala, dị ka a radieshon-dodging The Sims.
15. The ime ụlọ Three
Ma aga na The ime ụlọ egwuregwu ịnọgide magburu onwe touchscreen mgbaghoju anya egwuregwu, na-atọ n'ime usoro bụ nnọọ dị ka ihe ọma. Dị ka ya ụzọ, ya lekwasịrị anya anụ ahụ egwuregwu mgbagwoju anya, dị ka ị akpa ogho, enweta na ibubaa ime dị iche iche arịa chepụta ha na nzuzo. The zuru okè ihe ngosi maka adịbeghị anya iOS ngwaọrụ 'visual ikwo wkwo, ma a oké egwuregwu kwa.
14. Nke a War of Mine
Ọzọ egwuregwu na ga-enye gị mmetụta uche dị mma na-aga-ihe karịrị, nke a bụ a agha egwuregwu na-egwuri si n'ọnọdụ nke ndị nkịtị n'obodo a na ndị agha nọchibidoro. Ị ga-kewaa oge gị n'etiti ewu gị hideout na foraging na ize ndụ obodo n'okporo ámá, na ụfọdụ nnọọ ike mkpebi a ga-ama banyere ndị mmadụ n'okpuru gị nchedo.
13. Shooty efegharị
Ma mara dị ka otu n'ime ihe ndị ahụ Crossy Road Mmepe mere ọzọ: e wezụga reinventing Pac-Man, ha mere ka a rapidfire oge ịse-'em-elu. Ọ na-eji yiri Ọnọdụ ka Crossy Road: ị ga-anwụ mgbe nile, ma ga Ị kpọghee ekwt ọhụrụ odide dị ka ị na-enwe ọganihu. Ọtụtụ amara, na-enye ume ọhụrụ unaggressive ya na-eji ngwa ịzụrụ.
12. Akwụla agụụ: n'akpa uwe Edition
Otu n'ime ihe kacha siere egwuregwu na nke a ndepụta - na-amalite amalite na agbanyeghị - ma otu ruru anọgidesi ike na. Akwụla agụụ ahụ gị hapụrụ na a wilderness, -enwe ike ịchọta nri, ulo-ikwū-na izere ịbụ scoffed site na anụ ọhịa. An-echepụta ma ghara iru mmadụ ala ighikota na ngagharị-and-crafting genre.
11. Minecraft: Akụkọ nke mode
Minecraft onye rụrụ Mojang na mkpebi Team elu na Mmepụta Telltale Games maka a akụkọ njem gaara a ndudue, ma kama ọ bụ a na-enwe mmeri ịga nke ọma. A egwuregwu ekenịm ke ọzọ egwuregwu ụwa nwere ike ụda a bit meta, ma na-agụ akụkọ, olu ihe na fan-okowụk zoro mere ka nke a a na-emeso.
Minecraft: Akụkọ nke mode
Vintage console franchise Rayman na-otu n'ime ndị kasị pụrụ ịtụkwasị obi mobile Ịgba Cha Cha brands kwa, na a usoro nke magburu onwe ya touchscreen utu aha. Rayman Adventures na-agbaji streak, ọbụna na ya freemium Ọdịdị: yi-cartoonish n'elu ikpo okwu edinam na njikwa na mgbe imebi.
9. Alto si Adventure
Anyị na hụrụ snowboarding na ski egwuregwu tupu on iOS, ma ọ dịghị mgbe onye dị ka ọmarịcha-na-achọ ka Alto si Adventure. Ya ebupụtara-esi igwefoto na-ewepụta na-elekwasị anya dị ka ukwuu na-akpachara anya-deere nzụlite on your snowboarder, na physics na-eche dị nnọọ mma dị ka ị zip (na-awụlikwa elu) gafee undulating Okirikiri.
8. Brothers: Akụkọ Banyere ụmụ ndị ikom abụọ
The mbụ PC na console mbipute a meriwo ọtụtụ awards, na deservedly otú. Ọ na-ewepụta gị site na wringer ya akụkọ nke a ụzọ ụmụnna agbalị ịzọpụta nna-ha ndụ. Nkọ njikwa na lush visuals ga-abịarukwa unu na, ma ọ bụ akụkọ nke ga-ị na-egwu na-akpọ.
7. Ise ehihie na abalị na Freddy si 4
The ise ehihie na abalị na Freddy si usoro emeela a raara nye, fanbase, na ikpeazụ a egwuregwu na-ewute ha. Ọzọkwa, ị na-eme agha na ezi-creepy animatronic iro, ma e wezụga na nke a oge gburugburu ihe ka gbanwere ka ebe obibi gị. The kasị mma egwuregwu ma na mobile Premiya lanarị-iju-anya na usoro.
6. Alphabear: Okwu Puzzle Game
Fọrọ nke nta ka afọ anọ mgbe ya igba egbe, Triple Town ka bụ otu n'ime ndị kasị mma mobile puzzlers. Na 2015, ya Mmepụta mere ohiha-eri ahụ okwu egwuregwu, Alphabear, nke ahụ gị na-asụpe okwu ndị dị na Scrabble-dị ka taịl nile irite ihe - na-ewu katuunu bea. The zuru okè itinye-in itinye-esi mobile egwuregwu.
Ọ pụrụ kpakpando a ma ama egwuregwu ihu, ma nke a adịghị lackluster spinoff. Lara Croft Go - dị ka Hitman Go tupu ya - bụ na a maara ika etinyere a nkume-siri ike puzzle-njem engine. Lara Croft Go-ewepụta na-elekwasị anya kpọmkwem na gị na ike iche echiche nka, na isii isi nke zuru okè-guzobere visuals inyocha.
A ebube echiche maka onye ọ bụla onye na-ebi ama ama roleplaying game (RPG) genre. Evoland amalite dị ka a n'elu-ala, Otu agba njem ma jiri nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ ụzọ ya site na genre akụkọ ihe mere eme, agwụcha elu na whizzy ezigbo oge 3D alụ. A gimmick? Ekele ya kwadoo na-adọrọ game.
E nwere magburu onwe mobile nsụgharị nke Football Manager ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ma 2015 hụrụ na ọdịiche dị n'etiti mbadamba na desktọọpụ nsụgharị nke management SIM warara ọbụna n'ihu. Bụghị dịghị ihe ọzọ n'ihi igwe-oji-azọpụta nhọrọ igwu egwu gị zọpụta egwuregwu na ma.
Bụ nke a a egwuregwu, ma ọ bụ a ugbo-themed na-atụgharị uche ngwa? Nke ọ bụla, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma na na na iOS afọ a. Kọwara site na ya Mmepụta dị ka "a ịhụnanya leta osisi", ọ na-ahụ Ị na-azụlite gị na nwayọọ touchscreen swipes. The egwuregwu anya na-ada mara mma: na ngwọta gị mobile-igbe mbata nchegbu.
1. ya Story
An engrossing egwuregwu na-enye gị na-egwu tutuntu, na-atụgharị footage nke ndị uwe ojii gbara ndị na nwanyị di na-arahụ efu, sniffing si clues dị ka ị chọọ nchekwa data, ma na-karị, ee, ya akụkọ. Great iji ẹbọhọ ọtụtụ iri afọ nke echeta nke jogburu onwe ya "mmekọrịta video" egwuregwu.
Ya mere, gịnị ka anyị Agbaghara? Ihe ngalaba bụ oghe maka gị ihe na egwuregwu n'elu na gị nwere ikwu maka ndị ọzọ utu aha - ndị wepụtara maka oge mbụ na 2015, ọ bụrụ na ị na-emetụta.
• The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2014
• The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2013
← New ụdị nke ọnwa nkume chọpụtara site Chinese amị n'ọnwa lander The kasị mma Android egwuregwu nke 2015 →